कोरोनाका कारण आईपीएलमा यस्ता परिवर्तन देखिनेछ ! | | Neplays.com
कोरोनाका कारण आईपीएलमा यस्ता परिवर्तन देखिनेछ !
कोरोनाकै बीच इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल शनिबारदेखि युएईमा सुरु हु“दैछ । यो प्रतियोगिता पहिलोपल्ट बिना दर्शक ‘बायो सेक्योर’ माहोलमा खेलाइनेछ । कोरोनाकै कारण प्रतियोगिताको नियममै परिवर्तन गरिएको छ कि बल चम्काउनका लागि बलरले थुकको प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । तर यो नियमको असर दुई कारणले त्यति धेरै पर्ने छैन ।
१. सेतो बल दुई ओभरसम्म मात्र स्वीङ हुन्छ
यदी बलमा लार नलगाउने हो भने बलरलाई स्वीङ गराउन कठिन हुन्छ । तर ट्वान्टी–२० फम्र्याटको क्रिकेटमा यसलाई ठूलो चुनौति मानिदैन । चेन्नई सुपर किंग्सका तीव्र बलर दीपक चहरले पनि यस्तै कुरा गरे । उनले हालै एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए कि सेतो बल २ ओभरसम्म मात्र स्वीङ हुन्छ । राम्रो विकेट भयो भने ३ ओभरसम्म हुन सक्छ । यही कारणले सेतो बललाई चम्किलो बनाइराख्न जरुरी हु“दैन । हैदराबादका बलर भूवनेश्वर कुमारका अनुसार लार प्रयोग गर्न नपाउ“दा रिभर्स स्वीङका लागि भने समस्या हुनेछ ।
२. युएईको स्लो विकेट
युएईको आबुधावी, शारजाह“ र दुवईमा आईपीएल खेल हुनेछ । यहाँको विकेट स्लो छ । यसको मतलव यहाँको विकेट स्पिनरका लागि फाइदाजनक हुनेछ र तीव्र बलरका लागि त्यति सहयोग गर्ने छैन ।
यसै कारण बलमा लार लगाउन नपाउने नियमको असर त्यति धेरै पर्ने छैन । सन् २०१४ मा जव आईपीएलको २० खेल भएको थियो । त्यसको २ इनिङमा मात्र २ सय भन्दा बढी रन बनेको थियो । जवकि १२ पल्ट १ सय ६० भन्दा बढीको स्कोर बनेको थियो ।
आईएलमा यसपटक अरु परिवर्तन के–के ?
नो बलमा थर्ड अम्पायर
पहिलोपल्ट आईपीएलमा नो बलको निरीक्षण थर्ड अम्पायर अर्थात टिभी अम्पायरले गर्नेछन् । अब म्याचमा बलरको खुट्टा सेतो धर्काबाट बाहिर गए नगएको टिभी अम्पायरले हेर्नेछन् । गत वर्ष भारत र वेष्ट इन्डिजबीचको एकदिवशीय शृंखलामा पनि यसको प्ररीक्षण भएको थियो ।
अनलिमिटेड कोरोना सब्स्टिच्युड
आईपीएलको आयोजक भारतीय क्रिकेट बोर्डले यस सिजन अनलिमिटेड कोरोना सब्स्टिच्युडका लागि अनुमति दिएको छ । अर्थात प्रतियोगिताको बीचमा कुनै खेलाडीलाई कोरोना संक्रमण देखिएमा टोलीले अर्को खेलाडीलाई टिममा समावेश गर्न सक्नेछन् । नियमका अनुसार ब्याट्सम्यानको स्थानमा ब्याट्सम्यान र बलरको स्थानमा बलर नै सब्स्टिच्युड हुन पाउनेछन् ।
कन्कसन सब्स्टिच्युडका नियम पनि समावेश
यस आईपीएल सिजनमा पहिलोपल्ट कन्कसन सब्स्टिच्युडको नियम पनि लागू गरिएको छ । यदि कोही खेलाडी खेलका दौरान गम्भीर चोटग्रस्त भएमा वा टाउकोमा बलले लागेमा उनको स्थानमा अर्को खेलाडीलाई टिममा राख्न सकिनेछ । यो नियममा पनि सम्बन्धित पोजिसनका खेलाडीले मात्र प्रतिस्थापन गर्न पाउनेछन् । यो नियम पहिलोपल्ट सन् २०१८ को एसेज शृंखलामा लागू गरिएको थियो ।
चियरलिडर्स र समर्थक रंगशालामा हुने छैनन्
आईपीएल इतिहासमै पहिलोपल्ट कोरोनाका कारण खाली रंगशालामा खेल खेलाइनेछ । रंगशालामा समर्थकमात्र होइन रमाइलोका लागि राख्ने गरिएका चियरलिडर्स पनि हुने छैनन् । तर फ्रेन्चाइज टिमले टिभी स्क्रिनमा चियरलिडर्स र समर्थकको रेकर्डेट भिडियो प्रशारण गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।्
बायो सेक्योर माहोल भनेको के हो ?
बायो सेक्योर माहोल भनेको यस्तो अबस्था हो जहाँ बाहिरी दुनिया“बाट पूर्ण रुपमा अलग गरिनेछ । अर्थात आईपीएलमा संग्लग्न खेलाडी, सपोर्ट स्टाफ, म्याच अफिसियल, होटल स्टाफ र कोरोना टेस्ट गर्ने मेडिकल टिमका सदस्यसम्मलाई बाहिर निस्कन अनुमति हुँदैन । कुनै पनि ब्यक्तिलाई बाहिरी व्यक्तिस“ग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्ने अधिकार हुँदैन ।
बायो सेक्योर नियम तोड्नेलाई आईपीएलको प्रतियोगिता नियमावली अनुसार सजाय हुनेछ । खेलाडीलाई केहि खेलमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेसम्मको नियम छ । रोयल च्यालेन्जर्स बैंलोर टिमले त आफ्ना खेलाडी अफिसियललाई यस्तो चेतावनी दिइसकेको छ कि यदि कसैले यो नियम तोड्यो भने उसको सम्झौता स्वतः रद्ध हुनेछ ।
बलमा थुकको प्रयोग गर्नेलाई पनि कारबाही
कोरोनाका कारण आईसीसीले क्रिकेट बल चम्काउनका लागि थुकको प्रयोगलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो नियम पहिलोपल्ट आईपीएलमा लागू भएको छ । खेलका दौरान बलरले थुकको प्रयोग गरेमा हरेक टिमलाई दुईपल्ट चेतावनी दिइनेछ । तेस्रो पल्ट पनि प्रयोग गरेमा जरीवानास्वरुप विपक्षी टिमलाई ५ अतिरिक्त रन दिइनेछ । कोरोनाकै कारण टसपछि दुवै टोलीका कप्तानले हात मिलाउने छैनन् ।